Ny batterie FL karazana eo anoloana dia tonga miaraka amin'ny fiainana famolavolana maharitra sy fifandraisana fidirana eo anoloana ho an'ny fametrahana sy fikojakojana haingana sy mora, ary mety tsara amin'ny fitaovana an-telecom an-kalamanjana, rafitra angovo azo havaozina ary tontolo henjana hafa.
FL SERIES FRONT TERMINAL GEL BATTERY
Namboarina fiainana fanompoana mitsingevana: 12-15 taona @ 25 °C/77 °F.
> Famintinana ho an'ny bateria Slim Front Terminal
Amin'ny maha-mpanamboatra bateria asidra firaka malaza malaza any Shina, ny CSPOWER dia manolotra ny safidy malalaka indrindra amin'ny bateria AGM fidirana eo anoloana sy ny bateria GEL VRLA.Ny teknôlôjia gel dia manana fahambonian-javatra maro noho ny isan'ny bateria AGM mitovy, indrindra ho an'ny fampiharana fifandraisan-davitra.
> Endri-javatra ho an'ny bateria Telecom
Ity batterie tsy misy fiatoana ity dia miaraka amin'ny elektrôlôta gel tsara kokoa izay misy asidra solifara mifangaro amin'ny setroka silika ary tsy misy ny fametahana asidra.
Ny electrolyte dia toy ny gel ary tsy mihetsika, izay tsy mamela ny tsy fisian'ny leakage sy ny fihetsik'ireo takelaka bateria.
Miasa toy ny fitaovana famatsiana herinaratra tonga lafatra, ny bateria asidra firaka eo anoloana dia natao amin'ny endrika manify.Ny fifandraisana amin'ny terminal fidirana eo anoloana dia mety amin'ny fametrahana sy fikojakojana, ary ny serivisy toerana.
Ny famolavolana grid karazana radial sy ny teknôlôjia fivoriam-pivoriana mafy dia ahafahan'ny fampandehanana avo lenta avo lenta ho an'ny bateria GEL VRLA.
Noho ny famolavolana tsy manam-paharoa, ny habetsahan'ny electrolyte an'ity bateria ity dia tsy afaka mampihena ny fampiasana azy, ary tsy mila rano mandritra ny androm-piainany.
Ny firaka manokana manohitra ny harafesina dia ampiasaina mba hahatonga ny fitaovana fitahirizana angovo miaraka amin'ny fiainana famolavolana mihoatra ny 12 taona amin'ny 25 degre.
Ny akora manta madio tsara dia miantoka ny famotsorana ny bateria tena ambany.
Noho ny fampiasana ny teknolojia recombination entona, ny bateria indostrialy dia mirehareha avo dia avo ny tombo-kase fanehoan-kevitra mahomby sy tsy manome asidra zavona, ka sariaka sy tsy misy loto ho an'ny tontolo iainana.
Amin'ny alàlan'ny famolavolana manokana sy ny teknolojia famehezana azo antoka avo lenta, ny bateria dia voaisy tombo-kase, ka miantoka ny fiarovana azo antoka.
> Fampiharana ho an'ny bateria fidirana eo anoloana
Tonga lafatra ho an'ny EPS sy UPS, rafitra Inverter.
Rafitra masoandro sy rivotra
teo aloha: OPzV Deep Cycle Gel Battery
Manaraka: HTL High Temp GEL Battery
Fikojakojana ny terminal eo anoloana maimaim-poana GEL Batterie 12V
Battery Ups ho an'ny solosaina Batterie cellule solaire Batterie tsara indrindra ho an'ny rafimasoandro Batterie tsy misy fikojakojana Paneau solaire misy bateria ho an'ny trano Batterie 12v 7ah azo averina